एक – दुई एल्बम असफल हुँदैमा हारिनँ, छोडिन्न लोक संगीत : गणेश न्यौपाने - Sunday, 26th March 2017
Corporate Real State
Medicine / Ayurved
Security / Crime Nepal Army
Opinion My Nepal शहरमा जसको चर्चा छ
एक – दुई एल्बम असफल हुँदैमा हारिनँ, छोडिन्न लोक संगीत : गणेश न्यौपाने
मनोरन्जन | Monday, 7th November 2016, 06:48 PM | सदावहार संवाददाता २२ कात्तिक, काठमाडौं । ‘लोकगीत भन्ने बित्तिकै गाउँ–समाज वा लोक भाकालाई बुझिन्छ । गाउँ–समाजका मानिसले तुनेका, बुनेका र लय हालेका शब्द नै लोकगीत हो । लोक गायक वा संकलकले ती शब्द र लयलाई नयाँ पन दिने हो,’ लोक गीतबारे गणेश न्यौपाने भन्छन्, ‘मेरो सफलताको रहस्य निरन्रता भनौं, मैले लोक संगीत लाई निरन्तर माया गरि रहें ।’
गणेश न्यौपाने धनकुटाका हुन् । बाल्य कालमा धनकुटा जिल्लाको भेडेटार गा वि स – ९ मुक्तिन गाउँमा गाई गोठालो गर्दा न्यौपानेले लोक भाकाप्रति आकर्षित भए । मेलापात, दाउरा–घाँस गर्नेले गाएको भाकाले उनलाई छुन्थ्यो । उनले त्यसलाई टिपि हाल्थे । पछि २०३९ सालमा काठमाडौं आए । ट्रेकिङ जाँदा पर्यटकलाई लोकगीत सुनाउन थाले । पर्यटक सँगै अन्य धेरै साथीले उनलाई गाउन हौसला दिन्थे । आफूले चिनेकै सहकर्मी साथीहरुले लोक गीतका एल्बम निकाल्थे । यो देख्दा न्यौपानेमा पनि एल्बम निकाल्ने सोच आयो । उनले पहिलो एल्बम निकाले, झुमके–सल फिरिरी, जसलाई रञ्जना क्यासेट सेन्टरले बजारमा ल्याएको थियो । यो एल्बम खासै चलेन । हरेश नखाई दोस्रो एल्बम निकाले– शीतको थोपा । यो पनि चलेन । फेरि पनि हरेश नखाई अर्को एल्बम निकाले– धनकुटा डाँडाबजार । जसमा लेखन र गायन न्यौपानेकै थियो । यस एल्बमका गीत धनकुटा डाँडाबजार र कञ्चनजंघा शिरबोलको गीतले गणेश न्यौपाने लाई सांगीतिक क्षेत्रमा चिनायो ।
थुप्रै पूर्वेली लोक गायक बीच एक परिचित नाम हो गणेश न्यौपाने, जसले थुप्रै पूवेली लोक भाका गाएका छन् । उनले गायका लैलैमा कान्छी, ढाकाटोपी शिरैमा, हेरन कान्छी हेरन, धनकुटा भोजपुर जस्ता गीत चर्चित छन् । धनकुटा डाँडाबजार वोलको गीत बाहेक सबै गीतमा उनी आफैंले गाएका छन् । यी लोक गीत ठेट नेपाली भाषामा संक्लन गरिएका छन् । लोकगीत संकलन गर्न उनी गाउँ–गाउँ जाने गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मलाई कुनै खास समय चाहिँदैन, जति बेला फुर्छ, त्यति बेला गीत लेखन वा संक्लन गरिहाल्छु । तर बिहान वा बेलुका एक घन्टा रियाज गर्ने गर्छु ।’ उनले केही पुरस्कार र लोक गीत का अवार्ड पनि पाएका छन् । धनकुटा डाँडाबजार एल्बम को बी साइडमा रहेको कञ्चनजंघा शिरबोलको गीतबाट उनले १०औं सर्वोत्कृष्ट लोक गीत इमेज टुबोर्ग अवार्ड २०६५ हासिल गरे । उनी भन्छन्, ‘अवार्ड पाउँछु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । अवार्ड पछि सबैले बधाई दिए, झनै हौसला बढ्यो । नयाँ–नयाँगीत संक्लनमा लागि रहें ।’
त्यस पछि उनले अर्को एल्बम बजार मा ल्याए– लैलैमा कान्छी । यसमा पूर्वेली भाकामा माया–पिरतीका कुरा समेटिएका छन् । यो एल्बमले पनि राम्रै चर्चा पायो । यही सफलताको शृंखलामा उनले अर्को एल्बम निकाले – यानीमाया, २०६७ सालमा । यानीमाया पूर्वेली भाकाको मारुनी गीत हो । यही गीतले उनलाई १२औं सर्वोत्कृष्ट लोक गीत इमेज टुर्बोग अर्वाड २०६७ दिलायो । यस पछि त उनलाई गीत–संगीतको लतनै लाग्यो । त्यस्तै २०६८ उनले अर्को एल्बम बजारमा ल्याए– ढाकाटोपी शिरैमा । यसले फेरि उनलाई १३औं सर्वोत्कृष्ट लोक गीत इमेज अवार्ड २०६८ दिलायो ।
२०६९ माउनले अर्को एल्बम निकाले, निष्ठुरी मायालुलाई । यो एल्बमको गीत पनि विन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड – २०६९ सर्वोत्कृष्ट लोक गीत विधामा टप– ५ मा पर्न सफलभयो । त्यस पछि उनले २०७० सालमा धनकुटा भोजपुर एल्बम बजारमा ल्याए । यो एल्बमको शीर्षभाकाको गीतले उनलाई फेरि १५औं सर्वोत्कृष्ट लोक गीत इमेज अवार्ड दिलायो । न्यौपानका गीतमा ठेट लोक भाका पाइन्छ । जसले श्रोतालाई छुन्छ । श्रोतालाई छुने गीत गाएकाले उनका यत्तिका गीतले अवार्ड पाएका हुन् । उनले लोक गीत बाहेक चाड वाडका बेलामा गाइने देउसी गीत पनि गाएका छन् । उनले गाएका देउसी गीत पनि त्यत्तिकै चर्चित छन् ।
उनका सवै लोक गीतको भिडियो पनि बनेका छन्, जसमा नेपालीप नझल्कने पोसाकमा कलाकार हुन्छन् । न्यौपाने सक्षम पर्यटन व्यवसायी पनि हुन् । यो व्यवसाय माउनले ३० वर्ष बिताइ सकेका छन् । पर्यटन र संगीत क्षेत्र दुवैलाई मायागर्ने उनी बताउँछन् ।
लोक गीत काएल्बम निकाल्न म्युजिक कम्पनी आवश्यक हुन्छ । सुरुमा एल्बम निकाल्न दुःख पाएकाउनले २०६७ साल माआफ्नै कम्पनी हिमाली क्रियसन खोले । त्यही मार्फत एल्बम निकालि रहे । आगामी दिनमा पनि एल्बम निकालि रहने उनको योजना छ । उनको नयाँ एल्बम चाँडै बजारमा आउँदैछ । जसमा एउटा विवाह को गीत दुइटा पूर्वेली भाकाका लोक लीत र एउटा दुखान्त लोक आधुनिक रहन्छ ।
जय गीत संगीत, जय पर्यटन, जय नेपाल
गणेश न्यौपाने लोकगीत गाउँ–समाज Advertisement
आज विश्व कविता दिवस ८ चैत, काठमाडौं । आज नेपालमा पनि विश्व कविता दिवस मनाइँदैछ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पद्य विभागले विशेष कवि...
धनगढीमा चित्रकला प्रदर्शनी ४ चैत, काठमाडौं । आफ्नो भावनालाई रङ्गको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न ‘क्यानभासमा होली रङ्गीन’ सिर्जित चित्रको...
‘शाकुन्तल’ अब नाटकमा २४ फागुन, काठमाडौं । महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको ‘शाकुन्तल’ महाकाव्यलाई नाटकका रुपमा मञ्चन...
एकैदिन साहित्यकार घलेका २२ वटा कृति विमोचित १९ फागुन, काठमाडौं । वरिष्ठ समाजसेवी एवम् पूर्वमन्त्री भद्रकुमारी घलेले विभिन्न समयका अनुभवलाई सङ्ग्रह गरी...
कलाकार, लेखक तथा निर्देशक नकर्मीको निधन १६ फागुन, काठमाडौं । वरिष्ठ हास्य कलाकार, लेखक तथा निर्देशक रामशेखर नकर्मीको आज बिहान निधन भएको छ ।
जिग्री र पाँडे पनि पुगे दलितबस्तीमा, धुर्मुस र सुन्तलीको पद्चाप पछ्याउदै ४ फागुन, काठमाडौं । हास्यकलाकार जोडी कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडे यतिबेला सप्तरीको एक दलित बस्तीमा...
प्रणय दिवसमा म्युजिक एण्ड डान्स कार्यक्रम , डिजे र बाण्डसगैं झुमे युवा ४ फागुन,काठमाडौं । रसलाईट मिडिया प्रा.लिले अहिलेको युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर फेबु्रअरी १४ भ्यालेन्टाइन डे...
कोरियाबाट मेलिनाले ल्याईन् "मैले मन पराको मान्छे" ४ फागुन,काठमाडौं । पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका हुन मेलिना राई । २०७१ सालमा पहिलो एल्बम 'बहार' ल्याएकी...
नेपाल फेशन आइडल २०१७ हुने,फेशन आइडलको विजेतालाई नगदसहित विभिन्न अवसर ३ फागुन,काठमाडौं । विभिन्न इभेन्टहरु आयोजना गर्दै आएको रसलाईट मिडियाले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने...
६४ जिल्लामा मतदानस्थल तोकियो, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार केजरीवाललाई भारतीय अदालतले हाजिर हुन बोलायो भारतीय सेनाध्यक्ष रावत नेपाल आउँदै विद्यार्थीलाई तीन सयमा चन्द्रागिरि केवलकारको टिकट पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास हुँदै तनहुँको व्यास क्षेत्र गएरातीको हुरी र असिनाबाट ठूलो क्षति चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ स्वदेश फिर्ता चिनियाँ रक्षामन्त्रीले गरे बसन्तपुर दरवार क्षेत्रको अवलोकन चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीले गरे बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा विशेष सम्वोधन दुग्ध किसानले गरे १०० प्रतिशत नाफा खाने विरुद्ध आन्दोलन, लागत र पसिना किसानको नाफा चैँ बिचौलीयाको ? प्यूठानमा जिप दुर्घटना, टायर पड्किँदा एक जनाको मृत्यु बोआओ मञ्चमा भाग लिन प्रम चीनमा मुस्ताङमा ३७, सुनसरीमा एकसय ६५ मतदान केन्द्र अक्ष्यम्य अपराधको यो नौलो रुप, पैसाको लागि प्रेम गर्ने युवक प्रेमीकालाई हत्या गरी अझै फरार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभेद गर्यो जनजातिले क्षेत्री–बाहुनलाई यसरी पनि हेरौँ कि ! मेरो घरभन्दा एक घर माथि खतिवडा बाहुनको घर छ, जसलाई हामी डाँडाघरे बाजे भन्छौँ । डाँडाघरे बाजे र हामी मंसिरमा बराबरी...
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणमा अधिकारी र यादवको करोडौं कमिसन खेल २६ मंसिर, काठमाडौं । पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र...
खस क्षत्री–बाहुनका यी कुरा अरू जातिले पनि सुनुन् ........ राणाकालमा ठेक्का थितिअनुसार ३० रुपियाँ उठ्ती हुने ६० मुरी खलाखेत सरकारलाई बुझाउनेलाई ‘सुब्बा’को दर्जा र...
यसरी टुंगो लगायो कांग्रेस–माओवादीले मन्त्रीको सूची देउवा निकट मानिने र भारतसँग पनि ‘माधूर्य’ सम्बन्ध बनाउन सफल मधेसी अनुहार बिमलेन्द्र निधिले सुरुमा उपप्रधान...
यिनै हुन् चटपटे बेच्नेसँग पनि घुस असुल्ने प्रहरी निरीक्षक २७ मंसिर,चितवन । इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर चितवनमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक मधु नेपालको असुलीले यस...
ओलीमाथि लगाए कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीले यस्ता संगीन आरोप अर्जुननरसिंह के.सी.
‘तिमीले मसँग झुटो बोल्यौ भनेर म दुःखी छैन । म यसकारण दुःखी छु कि म अब तिमीलाई विश्वास गर्न...
अरुण काबेलीको शेयर खरिद गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न ? विचार गर्नुस् है ! प्राविधिक र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको इक्रा नेपालको दावी ९ कात्तिक, काठमाडौं । कतै तपाईं आईपीओ शेयर खरिद गर्न हतारिनु भएको त छैन ? हौसिएर आईपीओ शेयर निष्काशन हुने वित्तिकै...
माघदेखि आफ्नै खाताबाट शेयर किनबेच गर्न यी बैंकमा खाता खोल्ने हो कि ? मङ्सिर २८, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘आस्बा’ "एप्लिकेशन...
हिन्दूहरू कहिल्यै हार्दैनन् म तपाईं जस्ता देशभक्त राजालाई हार्दिक स्वागत गर्न उचित ठान्छु, माओले भने म लोननोल जस्ता जनताको छोरा भन्ने तर...
अर्जुननरसिंहले रक्षामन्त्री अस्वीकार गदै भने ‘ आत्मसम्मान, विचार र स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न सकिन ‘ &nbs...
© 2015 Sadawahar